About Us - Gormeet Plastic Products Co., Ltd
ISO 9000: 2008 fekitari vaipupurirwa
Us tumira @
Furidzira paaivaumba Procucts
Furidzira Kuumbwa Tools nyaya
Furidzira Kuumbwa ukomba, Tables
Indoor uye panze midziyo
Aikwana & Chairs
Jekiseni paaivaumba Products
Table uye cheya
Recreational uye nemitambo papuratifomu
Jet the dhoku uye nokukurumidza chikepe dhoku
Zvinoyangarara basa kuchikuva
Zvinoyangarara zambuko uye wetsoka
Keji purazi hove papuratifomu
Zvinoyangarara Solar System
Gormeet manufactures furidza Kuumbwa zvinhu nokuda achitungamirira makambani zvakawanda misika kupfuura vamwe furidza zvichaparara. Tine mainjiniya vane makore anopfuura 20 zvakaitika izvo zvinogona kupa muridze Kuumbwa mhinduro nokuda pazasi maindasitiri pamusika:
Hardware- Isu kugadzirwa zviuru chokushandisa nyaya, tiri chendarama nokutengesa Stanley, Blacke & Decker kwemakore.
-Traffic safety- Delineators, pasikweya, kwezvinovharidzira
-Sports & Recreation.
-Indoor uye panze Furniture
-Seating uye Chairs
-Medical uye nokutarisira
-Other maindasitiri zvigadzirwa
mutengi Chero kana Semi-mutengi chikumbiro, yedu yakafara ruzivo pamasikiro uye anogadzira zvinhu muridze Kuumbwa epurasitiki mudziyo nyaya uye tsika muridze Kuumbwa zvigadzirwa ichava kukubatsira kwamuri chero padanho ramunoda.
Chivimbo kunobva nenyanzvi, tiri MUKUSARUDZA mugadziri OF kuridza KUUMBWA PRODUCTS AND mugadziri Magorovhosi PRODUCTS VANOSHANDISA dzakasiyana-siyana pamusika maindasitiri mafomu.
Contact Us nokurova Kunoumbwa Solutions.